के हो पछिल्लो समय विश्वभर चर्चामा रहेको ‘एनएफटी’ ? कसरी करोडौं कमाउन सकिन्छ ? « Bizkhabar Online
के हो पछिल्लो समय विश्वभर चर्चामा रहेको ‘एनएफटी’ ? कसरी करोडौं कमाउन सकिन्छ ?
23 February, 2022 10:51 am
काठमाडौं । एनएफटी (नन फन्जिबल टोकन) पछिल्लो समय विश्वभर चर्चामा आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रायः मानिसहरू यसबारे चर्चा गरिरहका छन् । केही समय पहिले ट्विटरका पूर्व सीईओ ज्याक डोर्सीले आफ्नो ट्वीट एनएफटी को रुपमा लिलामी गरेका थिए जुन २४ मिलियन डलर अर्थात करीब ३० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यस्तै १० सेकेन्डको भिडियो क्लिप एनएफटीको रूपमा करिब ६.६ मिलियन डलर वा करिब ८० करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।
एनएफटी पछिल्लो समय कमाईको माध्यम बनेको छ । जसबाट भारतीय मेगास्टार अमिताभ बच्चनले करोडौं रुपैयाँ कमाए । उनले एनएफटी संकलनबाट करीब १२ करोड रुपैयाँ कमाए, जसमा टेभर्न प्रतिलिपि, हस्ताक्षरित पोस्टर र केही अन्य चीजहरू समावेश थिए । यदि तपाईं पनि चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले एनएफटी मार्फत ठूलो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । तर, तपाईंले केही कुराहरू बुझ्नुपर्छ ।
एनएफटी के हो ?
एनएफटी डिजिटल कला र डिजिटल रूपमा उपलब्ध चीजहरूको लागि प्रयोग भइरहेको छ । फन्जिबल भनेको दुईवटा चीजहरू आदानप्रदान गर्न सकिने हो, जस्तै पैसा । डिजिटल कला पनि असीमित हुन सक्छ र डिजिटल कलाको धेरै प्रतिलिपि बनाउन सकिन्छ । तर एनएफटी प्रयोग गरेर एक कलाकारले प्रतिलिपिलाई मौलिक रूपमा घोषणा गर्न सक्छ । यही कारणले गर्दा विपलको नाममा रहेको कलाकारको कोलाज ‘एभ्रिडे द फष्ट ५००० डे’ को लाखौं प्रतिमध्ये एउटा ओरिजिनल प्रतिलिपि लिलामीमा ७ करोड डलरमा बिक्री भएको थियो । नन फन्जिबललाई युकि पनि भन्न सकिन्छ । एनएफटीको सहयोगमा विपलले आफ्नो मौलिक कलाकृतिलाई मौलिक साबित गर्यो ।
मानौं तपाईसँग १०० रुपैयाँको नोट छ । यसलाई अन्य कुनै पनि रु १०० को नोटले बदल्न सकिन्छ, त्यसैले यो फ्युजिबल सम्पत्ति हो । अर्कोतर्फ, यदि तपाइँसँग क्रिप्टोकरेन्सी छ भने, तपाइँ यसलाई अर्को क्रिप्टोकरेन्सीसँग पनि साट्न सक्नुहुन्छ । तर यदि हामी गैर–फन्जिबल सम्पत्तिहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने ती डिजिटल सम्पत्तिहरू हुन्, जसलाई अरू कुनै चीजले प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । जसरी ज्याक डोर्सीको पहिलो ट्वीट एनएफटी भयो त्यसैले तपाईंले यसलाई कुनै अन्य ट्वीटसँग बदल्न सक्नुहुन्न । यसरी आर्ट पिस, संगीत, गेम, भिडियो आदिलाई एनएफटीको रूपमा ब्लकचेन प्रविधिमार्फत डिजिटल संसारमा राखिन्छ । यसमा एक युनिक कोड हुन्छ, जुन डिजिटल संसारमा अरू कसैको हुन सक्दैन ।
एनएफटी कसरी प्रयोग गरिन्छ ?
एनएफटीले कुनै पनि कलाकार र सामग्री सिर्जनाकर्तालाई उनीहरूको बहुमूल्य वस्तुहरू मुद्राकरण वा बेच्नको लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ । अर्थात् अब कुनै पनि अक्सन हाउसलाई अनौठो र बहुमूल्य वस्तुहरू लिलामी गर्न आवश्यक छैन, तपाईंले यसलाई एनएफटीको रूपमा लिलामी गर्न सक्नुहुन्छ । यसको ठूलो फाइदा यो हो कि यदि यो एनएफटी अन्यत्र बेचियो भने, कलाकारले यसमा रोयल्टी पनि पाउँछ । कुनै पनि प्रतिलिपि अधिकार भएको गीत, संगीत, पुस्तक आदिको बिक्री जस्तै पुस्तकको लेखकले रोयल्टी पाउँछ ।
कहाँ र कसरी बेच्न सकिन्छ ?
एनएफटी धेरै ठाउँमा बेच्न सकिन्छ । यी मध्ये केही ओपन सी, रेरिबल, सुपररेयरजस्ता प्लेटफर्महरू छन् । एनएफटीको रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै चीज बेच्नको लागि, तपाईंले पहिले एउटा वालेट सिर्जना गर्नु पर्छ । यसमा इथेरियम क्रिप्टोकरेनसी राख्नुपर्छ, किनकि धेरै एनएफटी प्लेटफर्महरू इथेरियममा निर्मित छन् । वालेटमा केही इथेरियम हुनु आवश्यक छ, ताकि लेनदेन शुल्क तिर्न सकिन्छ । यसपछि तपाईले जे बेच्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई एनएफटी मार्केटप्लेसमा राख्नुपर्छ, जसको अधिकतम साइज एमबी हुनुपर्छ । यदि तपाइँको एनएफटीको लागि अधिकतम मूल्य पाउन चाहनुहुन्छ भने धेरै स्थानहरूमा प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट लिलामी अधिकतम मूल्यमा गर्न सकिन्छ ।
ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित
एनएफटीक पनि बिटकोइन र अन्य क्रिप्टोकरेन्सी जस्तै ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित छन् । एनएफटीक एक अद्वितीय सम्पत्ति हो जुन तेस्रो पक्षहरूको मद्दत बिना अनलाइन सिर्जना गर्न, राख्न र व्यापार गर्न सकिन्छ । ब्लकचेन एक डाटाबेस हो जहाँ जानकारी ब्लकहरूमा भण्डारण गरिन्छ । यी ब्लकहरू चेनमार्फत एकअर्कासँग जोडिएका छन् । उदाहरणका लागि बिटकोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीहरू विकेन्द्रीकृत ब्लकचेनहरूमा आधारित हुन्छन् । प्रत्येक लेनदेन यसमा रेकर्ड गरिएको हुन्छ । तर, व्यक्तिले डाटा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । जानकारी धेरै कम्प्युटरहरूमा बचत गरिएको हुन्छ । यसले विवरणहरू परिमार्जन गर्न, ह्याक गर्न वा प्रणालीसँग छेडछाड गर्न असम्भव बनाउँछ । क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने हरेक कारोबार स्वतः अपडेट हुन्छ ।
एनएफटी केही वर्ष पहिलेदेखि नै थियो । तर, महामारीको अवधिमा एनएफटीमा विश्वको चासो बढेको छ । जब कला र मनोरन्जन स्थलहरू बन्द थिए, कलाकार र मनोरन्जनकर्ताहरूले मानिसहरू र खरिदकर्ताहरूसँग जोडिने नयाँ तरिकाहरूमा एनएफटी उपयोग गरे । एनएफटीले डिजिटल सामानहरूमा निश्चित गुणहरू थप्छ र तिनीहरूलाई मूल्य निर्धारण गर्न सम्भव बनाउँछ । उदाहरणको लागि एक कोलाज जो ७० मिलियनमा बिकेको थियो, त्यसमा एक विशेष ब्लकचेनमा कलाकारको हस्ताक्षर फाइल समावेश छ । एनएफटीले भाइरल मेम्सका सिर्जनाकर्ताहरूलाई उनीहरूको हस्ताक्षरको प्रतिलिपिहरू बेच्न अनुमति दिन्छ । एनएफटी कोडको लाइनहरु भन्दा बढी केहि हैन । तर, तिनीहरूले ब्लकचेनमा दर्ता गरेर कलाकृतिको विशिष्टता स्थापित गर्छन् । अनुवाद गरिएको